कहिलेसम्म जान्छ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ? » Etajakhabar
शनिबार, फाल्गुण १२, २०७४	| Saturday, Feb 24, 2018
काठमाडौँ- नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ ।
केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए । यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो ।
तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
चुनौतीलाई पार गर्दै गठबन्धन गठबन्धन सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती थियो । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड र देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सकाउने क्रममा छन् । दुई चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मधेसकेन्द्रितसहित सबै दल होमिएका छन् ।
एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने दाउमा देउवा माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार सहज रूपमा चलिरहेका वेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराउन सफल भएका थिए । माओवादीलाई अलग गराएपछि देउवाले तत्काल सरकारमा दाबी नगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदासम्म सरकार चलाउने भद्र सहमति गरे ।
गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ? स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन ।
सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र सीमित भएन, स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा यी दुई दलले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तालमेल गरे । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन हुँदा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म केन्द्रीय नीतिअनुसार तालमेल भएको थियो ।
माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन गठबन्धनकै पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनअघिदेखिको कांग्रेससँगको गठबन्धन आगामी तीनवटै निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग जाने बताइन् । ‘गठबन्धन हुँदादेखि नै संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदासम्म सहकार्य गरी जाने सहमति भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘सोहीबमोजिम सबै निर्वाचन हुँदासम्म इमानदारिताका साथ पालना गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’
एमालेसँग यसकारण चिढियो माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि माओवादीकै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर, बजेटपछि सरकार छोड्ने भद्र सहमति ओलीले पालना नगरेपछि बाध्य भएर सरकार छोड्नुपरेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन प्रचण्डले गठबन्धन राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्ने बताएका थिए ।
असफल संशोधनको सकारात्मक सन्देश संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ मत पुगेन । तर, संशोधन फेल हुँदा पनि कांग्रेस र माओवादीले मधेसी दललाईसमेत आफ्नो कित्तामा ल्याउन सफल भएका छन् । फेल हुने निश्चित भए पनि सबैको फेस सेभिङ गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगिएको थियो । संशोधनका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले मत दिएनन् ।
माओवादीसँग दीर्घकालीन गठबन्धन गर्छौं : रमेश लेखक कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन विशुद्ध सरकार निर्माणका लागि मात्र होइन । मुद्दालाई किनारामा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर नै दुईपटकसम्म गठबन्धन चलेको हो । हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सहज कार्यान्वयनलाई लक्ष्य मानेका छौँ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका दुई शक्ति (कांग्रेस–माओवादी)को गठबन्धन जायज छ । मुलुकले अझै यो गठबन्धनको निरन्तरता चाहेको छ । तराई–मधेसलाई संविधानको दायरामा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न हामीसँगै हिँडेका हौँ ।
एउटै ग्राउन्डका खेलाडीको मित्रता स्वाभाविक : पुरुषोत्तम दाहाल, विश्लेषक सिद्धान्ततः नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै मिसन छ, त्यो हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जता फर्किएका दल भए पनि यी सबै एउटै ग्राउन्डका खेलाडी भएकाले जो पनि एक अर्काका साथी बनेर जान सक्छन् । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले पनि यही देखाउँछ । जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भयो । यो लय आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि ठाउँ र अवस्था हेरेर हुन सक्छ । अर्कोतिर, संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यसकारण पनि एक दलको मात्र बहुमत आउँन सक्दैन । साझेदारी गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । यस्तो शैली एमालेले पनि अपनाउन सक्छ ।
प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रस्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । अहिलेकै गठबन्धन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि मिल्ने योजनामा छन् । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति–प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २८, २०७४ समय: ८:४४:१४
मनोज पुन : ‘फागुन ६ गते भारतको गोवामा सादा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरेको थिए’भारतमा असहज भएपछि नेपाल भारत सिमा नजिकै देवदहमा ल्याएर इन्काउन्टर गरेको खुलासा
केहि दिन अघि प्रहरी इन्काउन्टर मारिएका गुन्डा नाइके मनोज पुन र सोमबहादुर आलेको घट्नाले लियो अब यस्तो मोड !
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीको कडा टिप्पणीः आशलाग्दा यी नेताहरुलाई प्रचण्ड–ओलीले नै ‘स्याबोटेज’ गर्दैछन् ! मेडिकल माफियाका सरदारलाई केपी ओलीले नै उचालेका हुन् : (भिडियो)
छोराको फलामे रड प्रहारबाट आमाको मृत्यु, बहिनी गम्भीर घाइते
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमाल भन्छन्, “सम्झौता र शर्तका आधारमा मधेशवादी दललाई सरकारमा सहभागि गराउँदैनौँ”